Le kwakuyimiphumela yamazinga okushisa aphezulu kumaMaya | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impucuko yamaMaya yayingenye yezithuthuke kakhulu e-Antiquity, njengoba kukhonjiswa yimicebo eminingi yemivubukulo esekhona kuze kube namuhla. Kodwa-ke, amazinga okushisa aphezulu abangela izinkinga ezinkulu, kwaze kwafika ezingeni lokuthi Babeyimbangela eyinhloko yezingxabano zempi ezenzeka ngasekupheleni kobukhona bazo.
Lokhu kushiwo ithimba labavubukuli kanye nezibalo ezivela eSimon Fraser University eCanada, abashicilele ucwaningo lwabo kumagazini i-'Quaternary Science Reviews '. Ingabe ikusasa elifanayo lisilindele?
Abaphenyi bafunde izehlakalo ezenzeka phakathi kuka-AD 363 no-AD 888. C., okuyisikhathi lapho izakhiwo zaseMayan zazihlala khona ngesikhathi isibalo sezingxabano zempi sanda, ukuze kutholakale ukuthi iyiphi inguquko yesimo sezulu engabamba iqhaza ekwandeni kwezimpi ngokuzayo.
Ngakho-ke, ngemodeli yezibalo, Bakwazile ukuqinisekisa ukuthi izimvula azibuthinti ubudlova, kepha ukwanda kwamazinga okushisa kubenze baba nodlame kakhulu. Umbhali osebenza naye we ukutadishaUMark Collard uchaze ukuthi "ucwaningo oluningi luthi abantu banolaka ezimweni ezishisayo." Kodwa-ke, wengeze ukuthi kumaMayan into ebaluleke kakhulu ibihlobene nomphumela amazinga okushisa aphezulu anawo kulinywa ummbila.
Ummbila wawubaluleke kakhulu kubo, kangangoba isithunzi sabaholi sasixhomeke, hhayi empumelelweni yabo kuphela ezimpini, kepha nokuthi babekwazi yini ukutshala lokhu okusanhlamvu kahle ngokwanele ukuze kudliwe abantu bonke. Lapho kunesomiso namaza okushisa, isivuno sasincishiswa kakhulu, ukuze bakhethe ukubamba iqhaza ezingxabanweni eziningi zamasosha.
Yize kunzima ukwazi ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuzoletha izimpi eziningi yini, kuyinto okungafanele siyinqabe. Abanye bathi impi elandelayo kuzoba eyamanzi; Hhayi ngeze, singabantu abaningi ngokwengeziwe abahlala lapha futhi kunezinsizakusebenza ezimbalwa futhi ezimbalwa esizitholayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Le kwakuyimiphumela yamazinga okushisa aphezulu kumaMaya